Company Profile - Tianjin Tanggu TWT valvụ Co., Ltd
TWT R & D ìgwè
TWT nwere magburu onwe agadi technical R & D ìgwè, onwem na elu nkenke ngwá R & D center na ule center, na ihe karịrị na afọ 50 nke na-akwakọba technology, R & D na n'ichepụta elu mma, ike ịzọpụta na gburugburu ebe obibi-echebe elu-tech ngwaahịa bụ ụlọ ọrụ R & D ọkọlọtọ TWT. TWT mmepe na mmepụta nke ngwaahịa meriwo karịa na 20 Ikike nchọpụta Kemịkalụ na ọtụtụ mba kwuo, na bụ nchoputa nke Ministry of ígwè ụlọ ọrụ valvụ mmepụta ọkọlọtọ.
TWT Quality System na Quality nkwa
Anyị na-ewere ngwaahịa nchekwa na a pụrụ ịdabere na àgwà dị ka ndị Enterprise mkpụrụ obi; na China valvụ ụlọ ọrụ, anyị bụ ndị mbụ inweta ISO 9001 asambodo nyere site DNV: 2008 Quality System Asambodo; na na anyị na-nwetara EU Pressure Equipment ntụziaka 97/23 / EC (OA asambodo) na factory asambodo site CCS.
TWT Core Uru
Anyị na-mgbe na-ekere òkè na-azụ oru pesonel iji hụ na ahịa pụrụ ebi ezigbo ọrụ nke Mmeputa. Anyị na-ejere ndị ọkachamara na-na ọgaranya ahụmahụ ndị na echichi, debugging na mmezi; na na ngwaahịa ndị na akụkụ ahụ mapụtara yiri nkata. Anyị na-ekwe nkwa na anyị nwere ike ịkpọtụrụ gị ma nye gị zaghachi n'ime 48 awa mgbe na-anata quality mkpesa ma ọ bụ oru nkwado arịrịọ si ahịa na mpaghara ọ bụla na ụwa. I nwere ike ọma kwere, ebe a, ị nwere ike na-enwe na-enwetụbeghị ụdị elu-edu ọrụ.
"Okwukwe, Quality na Innovation" bụ isi uru nke TWT Company
Nke a bara uru usoro bụ ntọala nke Company echiche na omenala,
dị nnọọ ka ahụ dị ka mgbe TWT si inception na 1956.